Akụkọ - A na-etinye igwe nchacha ahaziri ahaziri na Singapore
Ọ bụ ụdị dị elu dị elu, igwe a na-arụ ọrụ kachasị mma
3000 * 12000 mm, ụlọ ọrụ mbụ buru ibu nke igwe igwe na otu oge na-akpụ usoro, azịza ọkachamara maka nnukwu ngwa ọrụ akụrụngwa dị iche iche dị iche iche n'ihi ọtụtụ nsogbu nhazi nkebi, ndị ahịa nwere afọ ojuju maka ngwọta laser na ọkachamara mgbe erechara ọrụ, kpebie. ịzụta igwe dị elu 15000W fiber laser cutting machine si SUNTOP oge ọzọ.
N’ọnwa Ọktọba gara aga, nnọkọ nke ise nke Kọmitii etiti CPC nke iri na itoolu bịara na njedebe. Nnọkọ nnọkọ a mere atụmatụ zuru ezu maka mmepe China n'oge “atụmatụ afọ iri na anọ nke afọ ise”, wee kọwaa ebumnuche ogologo oge nke 2035. Nke a na-egosi na, site na afọ na-esote, China ga-abanye n'ọkwa ọhụrụ nke mmepe, na nke ọhụrụ A ga-etolite echiche echiche mmepe ọzọ, a ga-arụkwa usoro mmepe ọhụụ yana nnukwu okirikiri ụlọ dịka isi ahụ na mgbasa ozi ụlọ na nke mba abụọ na-akwalite ibe ha.
Na usoro mmepe ọhụụ, echiche mmepe ọhụụ na usoro mmepe ọhụụ, mmeghe na-arụ ọrụ dị mkpa mgbe niile. E mere China International Expo Expo nke atọ mgbe nnọkọ nke ise nke Kọmitii Kọmitii 19 nke Communist Party nke China gasịrị. Ọ gara n'ihu na-akpọsa mwube nke ugwu ọhụrụ maka imeghe, na-akwalite mmepe ọhụụ nke azụmaahịa mba ofesi, na-ebuli ọnọdụ azụmahịa na-aga n'ihu ma na-eme ka mmekọrịta nke mba abụọ, nke ọtụtụ mba na nke mpaghara dị omimi. Ihe anọ ndị a bụ nkọwa kachasị mma n’okwu nke ọkwa dị elu na-emeghe na nnọkọ nke ise nke 19th CPC Central Committee.
"Ọnụ ụzọ mmeghe ga-emeghe naanị na mbara" bụ nkwa China na-enweghị atụ. Nkwupụta na-aga n'ihu nke usoro mmeghe na-egosi na mmeghe nke China nwere njikọ chiri anya ma na-aga n'ihu mgbe niile. Uwa huru obi ike, mkpebisi ike na ntachi obi nke mmeghe China na-aga n'ihu.
"China ga-agbasawanye mmeghe ya n'ụzọ niile, ka ahịa ndị China wee bụrụ ahịa ụwa, ahịa na ahịa maka onye ọ bụla, ma tinye ike dị mma na mba ụwa." Okwu President Xi Jinping gwara ụwa na "imeghe" bụ ntọala dị mkpa. Ọ bụ kpọmkwem n'ihi na e nwere ọtụtụ iri puku "na-emeghe" nzụlite n'ụwa. Na-adabere na nkwado na ịrụkọ ọrụ ọnụ, maapụ akụ na ụba ụwa na-egosi akụkụ mara mma ma mara mma. Na ndò nke maapụ akụ na ụba ụwa, China na-ekwupụta n'ihu mmeghe mmeghe ma na-atụ aro na mba niile kwesịrị ịrụkọ ọrụ ọnụ iji kwalite mmeghe ọnụ nke imekọ ihe ọnụ, mmeri na ọchịchị, nke na-akọwa nhọrọ China nke "iguzo n'akụkụ aka nri nke akụkọ ihe mere eme", nke na-esetịpụ ihe atụ maka mba niile iji meghee ọnụ ma gbakwunye agba na-enwu gbaa na map akụ na ụba ụwa.
Eriri Laser Pipe tingcha Machine, Eriri Laser tingcha Machine, Tube Laser cutter, China Fiber Laser tingcha Machine, Pipe Fiber Laser cutter, Eriri Laser tube tingcha Machine,